Ịhọrọ Mac kacha mma maka kọleji | esi m na mac
Jordi Gimenez | | Mac kọmputa
Otu n’ime ajụjụ ndị anyị na-anaghị ajụkarị mgbe anyị na-azụta mapụ mahadum bụ nke anyị ga-ahọrọ. N'echiche a, enwere nhọrọ ole na ole dị na nke ọ bụla n'efu. họrọ akụrụngwa nke dabara gị mma dịka mkpa gị na akpa gị si dị. Ma ọ bụ na Apple maralarị ya, ị nwere ike imefu oke iji rụọ ọrụ yana na akụrụngwa na-anabata nke ọma, na-arụ ọrụ yana ezigbo mma ma ọ bụ na-emefu ọtụtụ ihe yana na akụrụngwa bụ igwe dị ike ma dị egwu.
1 Kọmputa Apple maka kọleji
2 Mac imewe na ibu
3 Atụmatụ nke Mac nwere M1 processor
4 Kpakpando nke ụmụ akwụkwọ mahadum bụ MacBook Air
4.1 Ọnụ ahịa MacBook Air bụ otu n'ime ihe kacha sie ike
Kọmputa Apple maka kọleji
Ịhọrọ kacha mma Apple kọmputa maka mahadum bụ a dịtụ mgbagwoju anya ọrụ na ọ dịghị mfe ịza ajụjụ banyere nke kọmputa dabara anyị karịa ma ọ bụ obere. enwere ọtụtụ ihe ndị na-agbanwe agbanwe na-ekpebi ịzụta otu ngwa ma ọ bụ ọzọ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, na ngwá ọrụ ndị bụ isi nke Apple na-ere, anyị nwere ike dozie obi abụọ ahụ ngwa ngwa, mana enwerekwa ụmụ akwụkwọ mahadum ndị na-ahọrọ ngwá ọrụ dị ike karị. Na nke a na mbata nke ọhụrụ Apple Silicon M1 processors, ụlọ ọrụ ahụ kụrụ tebụl ahụ megide ọdịiche dị na Intel. Ugbu a, ọ dịtụ mfe ịhọrọ Mac na ebe ọ bụ na ha niile nwere ike na ike arụmọrụ dakọtara na ngwá.
Ọ bụrụ na ọ nwere ike, ịhọrọ Mac maka mahadum nwere ike ịbụ obere isi ọwụwa maka nwa akwụkwọ ahụ, ya mere taa, anyị ga-agbalị dozie ụfọdụ obi abụọ dị ma a bịa n'inweta ihe ọhụrụ Mac nke ihe karịrị 1000 euro iji gaa na klaasị wee soro ya rụọ ọrụ.
Mac imewe na ibu
Apple Macs ọhụrụ ahụ nwere ezigbo akpachapụ anya na ọ bụ ezie na ụdị MacBook Pro, ọ dị ka ha ejirila ụdị ndị ahụ buru ibu laghachi azụ ntakịrị oge gara aga. ha na-enye ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri nke ọtụtụ oge ụmụ akwụkwọ mahadum anaghị eji. Ọ bụ ya mere na mbụ MacBook Pro ọhụrụ nwere M1 processor agaghị abụ akụrụngwa akwadoro maka ụmụ akwụkwọ mahadum ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ. Nke a apụtaghị na ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ịhọrọ MacBook Pro ọ bụ ụdị ọjọọ, kama nke ahụ.
N'okwu a, ịdị arọ nke ngwá ọrụ na ihe ọhụrụ 16-inch nke Apple malitere, anyị na-ezo aka na 16 ″ MacBook Pro, ọ gaghị abụ ihe kacha mma iburu ya mgbe niile na akpa azụ. ọ bụ ezie na ntakịrị ihe karịrị kilo abụọ nke arọ nke o nwere na-ebuli ya.
Ọ bụrụ na anyị na-elekwasị anya na 14-inch MacBook Pro, ibu ya nke 1,61kg ọ dị ntakịrị karịa mana ha anaghị adị irè ma a bịa n'ibu ha n'ime akpa ma ọ bụ akpa ụbọchị dum. Anyị na-ekwughachi, nke a ekwesịghị ịbụ ihe na-eweghachi azụ azụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijide ha, ha bụ ngwá ọrụ dị mma ma ha agaghị abụ MacBook kacha mma maka mahadum n'ihi nha na ibu.
Atụmatụ nke Mac nwere M1 processor
N'okwu a, uru nke Mac ọhụrụ nwere M1 bụ obi ọjọọ. Ndị ọhụrụ processors ulo oru site Apple na-enye onye ọrụ a n'ezie na-akpali ike na kwụụrụ onwe ruru, otú ndụmọdụ mbụ anyị na-enye gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere ike, na-aga ozugbo na kọmputa na a processor, n'agbanyeghị ihe kọmputa bụ. Ma ọ bụ ya N'okwu gbasara mmelite, ọ bụkwa ihe bara uru ịnweta processor ọhụrụ n'ime Mac. ebe ọ bụ na n'ọdịnihu ọ ga-emelite n'ezie.
Mgbe anyị mepee weebụsaịtị Apple ma anyị na-ahụ MacBook Pro ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere iche banyere ha maka kọleji otu ndị a bụ n'ezie ike na-akpali Mgbe ị na-eche maka ịzụrụ Mac maka mahadum, mana ị ga-eche mgbe niile maka ibugharị na ụdị 16-inch agaghị abụ ihe akwadoro maka ya.
Ụdị MacBook Pro ndị ọzọ, ma 13-inch na 14-inch, nwere ike ịdaba n'ime "ngwaọrụ a kwadoro" maka mahadum, n'agbanyeghị na ha achọghị ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na njedebe. nhọrọ maka ọdịiche-ọnụahịa nwere ike bụrụ nke siri ike.
Kpakpando nke ụmụ akwụkwọ mahadum bụ MacBook Air
N'oge a anyị nwere naanị MacBook Air fọdụrụ. Otu a na-abụkarị ndị ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ n'ihi obere arọ o nwere, nke a bụ 1,29 kg. Ọbịbịa nke ndị nrụpụta M1 ọhụrụ mere ka otu a bụrụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ihe kachasị mma na akụkọ ihe mere eme nke MacBook Air.
Na mbụ, naanị onye iro ọ nwere na tebụl n'ihe gbasara mbugharị, njirimara na nha sitere na ụlọ ọrụ Cupertino. MacBook nke anụ ọhịa 12. N'ikpeazụ, ewepụrụ ngwá ọrụ ahụ n'ahịa, na-enye ohere maka MacBook Air dị ka nhọrọ kachasị mma n'ihe gbasara ibugharị.
Ugbu a na mbata nke ndị na-arụ ọrụ M1 ndị a MacBook Air ga-abụ maka anyị ngwá ọrụ kachasị mma mgbe ị na-ebuga ha mahadum ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, n'ihi na dị iche iche ihe ma tumadi n'ihi na ya nnukwu 13,3-inch (diagonal) LED ihuenyo na IPS technology, nwa afọ mkpebi nke 2.560 site 1.600 na 227 pikselụ, nke bụ ihe karịrị ezuru n'ihi na ọtụtụ ikpe.
Ọnụ ahịa MacBook Air bụ otu n'ime ihe kacha sie ike
The price bụ ihe na-arụkwa na ihu ọma nke MacBook Ikuku. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na 13-inch MacBook Pro nwekwara ọnụ ahịa yiri nke a MacBook Ikuku nwere M1 processor, nke. bụ 1.129 part uru dị n'ihe gbasara ibugharị dị mma na ụdị ikuku. Ya mere, ọ bụ kpakpando mgbe ị na-ahọrọ kọmputa mbụ maka mahadum.
O doro anya na onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ otu ha chọrọ maka mahadum mana na nke a, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum malitere na otu n'ime otu ndị a ma n'ikpeazụ na-ere ha ịzụta ihe nlereanya dị elu. Buru n'uche na kọmpụta Apple anaghị atụfu ego dị ka kọmpụta ndị ọzọ, yabụ mgbe ị na-etinye ha maka ọrịre ịzụta ihe dị ike ma ọ bụ ka mma, a ga-akwụghachi ụgwọ ego mbụ ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na MacBook Ikuku ga-abụ akụrụngwa nke ọtụtụ n'ime gị họọrọ maka mahadum yana Ọ bụ otu n'ime mkpebi kachasị mma n'ihe gbasara ịdịmma, ike, obere ibu na ọnụahịa. Mgbe ahụ onye ọ bụla na-ahọrọ ihe ga-adabara ha mma, mana nke a ga-abụ nhọrọ kacha mma maka kọleji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ịhọrọ Mac kacha mma maka kọleji